QORAAL YAAB LEH: Buug laga qoray odey soomaali ah oo afar xaas leh | Somaliska
Ninka lugu magacaabo Oscar Trimbel ayaa buug uu qoray waxaa uu kaga hadlay nin uu ku sheegay inuu yahay soomaali kaas oo leh afar xaas. Buuggan oo ah buug sheeko carruureed ayaa waxa ninka qoray kaga hadlayaa ilmo dalkii dalxiis u tagay oo soo arkay awoowgood oo afar xaas leh.
Buuggaan oo loogu magaray “Farfar har fyra fruar” oo marka afka soomaaliga loo rogo noqoneysa Awoowe waxaa uu leeyahay afar xaas, ayaa waxaa si weyn baraha bulshadda aad u saameeysay hadal heeynta odeygan iyo afartiisa xaas.
Kooxaha cunsuriyiinta ah ayaa barahooda waxeey ku magac xumeeyeen dhaqanka soomaaliga. Sidoo kale buuggan ayaa waxaa uu dhaliyey dood la xirriirta fikirka ay carruuruhu ka qaadan karaan ee ah in ninku afar xaas yeelan karo.
Ninka buuggan ayaa markuu arkay dooda ay dhalisay waxaa uu go’aansaday inuu joojiyo iibintiisa, waxaana uu ka gaabsaday inuu ka warbixiyo ujeedadii ka dambeeysay qorista sheeko noocaan ah.
Bulshadda soomaalida ee dunida galbeedka yimid ayaa marar badan waxaa dhacda in hadalo aflagaado ah, bahdil iyo magac xumeeyn qowmiyadeed ay kala kulmeen bulshooyinka ay u yimaadeen. Marka arrimaha noocas oo kale ay dhacaana ma muuqato talaabo wax ku ool ah laga qaado.